Tena ilaina: fonosana lehibe amin'ny entana krismasy amin'ny $ 19 | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | sary, dia midika hoe, Cartoon vector
Miverina miaraka amina fonosana Krismasy iray hafa izahay izay hankafizinay sy hanitarana ny loharanom-pahalalanao hahafahana manao karatra firariana Krismasy, mandefa karatra paositra na handravaka ny tranonao miaraka amin'ireo DIY ireo. Manana entana Krismasy mihoatra ny 1.800 isika izao ho an'ny volavolanao amin'ny $ 19 fotsiny.
Eny, rehefa mamaky azy ianao. Hafa amin'ireo tolotra tsy azo soloina ireo Amin'izay hanitarana ny atiny mifandraika amin'ny Krismasy ary izany dia hahafahanao miovaova tanteraka rehefa afaka manome teti-bola ho an'ny mpanjifa isan-karazany. Raha ianao koa dia iray amin'ireo izay matetika mitady fiainana, dia tsy vitsy ireo 19 dolara hahafahana manome fanomezana manavaka be amin'ny olon-tiana, ka tohizo!
Vidio eto ny fonosana amin'ny 19 dolara fotsiny
1 Kitapo manana kalitao goavambe
2 Ny fiavian'ny sary moka cuckoos
3 Vorondolo noely amin'ny PNG
4 Preset 620 ho an'ny Lightroom
6 Fomba krismasy miisa 260
7 Layers Noely 100
8 Hazo minimalista 25 ho an'ny Krismasy
9 PSD Krismasy sosona 5
10 Hantsana lanezy 24
11 Volom-panala volamena 24
12 Krismasy grunge sy metaly
13 Volom-panala isan-karazany
Kitapo manana kalitao goavambe
Alohan'ny hanohizantsika manasongadina ny atiny tsirairay izay ho hitanao ato amin'ity fonosana ity dia tsy maintsy milaza isika fa maro amin'izy ireo sary sy sary dia manana kalitao lehibe. Izany hoe, mitovy amin'ny andrasana anio izy ireo amin'ny karatra firariana Krismasy vita tamin'ny taona 2018 hifindra amin'ny 2019.
Repertoire saika tsy misy fetra izany manangona karazana sokajy rehetra ao anatin'ny Krismasy. Sarin'i Santa Claus, hazo krismasy, ski ski, ny sary nataonao manokana, biby mahazatra an'io daty io toy ny renindry na ireo sarin'ny boaty fanomezana tena tsara natolotra izay afaka manampy anao hisongadina amin'ny tamba-jotra sosialy.
Izany dia fonosana Krismasy tena tsy manam-petra ary iza no tsy ory na inona na inona. Misongadina ny atiny ho an'ny:
Sary sary 20.
Sary 10 amin'ny endrika PNG misy ambadika mangarahara.
Zava-bolo PSD miloko 36.
Snowflakes 408 amin'ny endrika PNG misy ambadika mangarahara.
Fiorenana 260 miaraka amina mangarahara (avelao ny famerenana).
450 sosona miaraka amina mangarahara.
620 preset an'ny lightroom hanatsara ny sary Krismasy rehetra ananantsika.
Ny fiavian'ny sary moka cuckoos
Inona no holazaina momba ireo fiavahana mangarahara amin'ny endrika vector miaraka amina endrika hafa ary tena hafa mihitsy. Raha te-hamorona taratasy famonosana anao ianao, mamorona karatra krismasy na sary an-tsary amin'ny ampahany amin'ny tranonao amin'ny taratasy, ireo sary vongana ireo dia mihoatra ny tonga lafatra.
Hafa tanteraka ny endrika ary mavokely ny lokony. Mampiavaka azy tonga lafatra ireo hazo krismasy ireo ihany ary amin'ireo kintana izay mahatonga azy ireo hamorona saika miavaka. Raha te-ho hafa ianao ary hahatonga ny mpanjifanao ho gaga amin'izany fikasana manokana izany, ity fonosana sary vongana ity no tsara indrindra amin'ity fonosana ity.
Ity fonosana ity dia azo alaina mangarahara ho an'ny AI, EPS ary na endrika SVG aza; Raha atao teny hafa, izy ireo dia mety hiteraka ny fiatraikany kely indrindra amin'ny lanjan'ny tranokalanao raha fantatrao ny fomba fampidinana ny endrika vector amin'ny kilobytes.
Vorondolo noely amin'ny PNG
Iray amin'ireo atiny hafa miavaka amin'ity fonosana ity ny an'ny vorondolo noely. Cuckoos vorondolo andiany izay ahitantsika azy ireo amin'ny karazany rehetra miavaka amin'ireo maso akaiky ireo. Azonao atao ny mitondra azy ireo amin'ny karazana tanjona kendrena ka izy ireo no lasa mpilalao fototra.
Misy izany Satroka krismasy, miaraka amin'ny elatry ny anjely, miaraka amin'ny tandroky ny serfa na misy satrony hafa aza izay manala ny sery amin'ny sofiny. Azonao atao ny manambatra azy ireo amin'ny sary miovaova be indrindra mba ho tonga sary mahafinaritra miaraka amina sary somary mitandrina.
Raha atotaly dia misy vorondolo mahafatifaty 10 amin'ny endrika PNG misy izany mangarahara izany ka nilaina afaka miara-miasa amin'izy ireo avy amin'ny Photoshop na ireo programa Affinity izay tena mahomby. Mampahatsiahy anao izahay fa ity fonosana vorondolo ity dia misy koa ny singa maneho ny endrik'izy ireo. Izany hoe, ny mason'izy ireo, ny vavam-bitsika ary ireo singa haingon-damban'ny fitafiany ireo hahafahanao "manangana" vorondolo anao manokana.
Preset 620 ho an'ny Lightroom
Lightroom dia manana lasa programa ilaina amin'ny famerenana sary ny sary. Ary na dia azontsika atao aza ny mandany ny ampahany amin'ny androm-piainantsika amin'ny fanaingoana ireo preset ireo mba hahitana valiny rehetra na hanasongadinana fa ny chiaroscuro sary nalaina tamin'ny finday avoakanay na Nikon, ny fahamarinana fa manana andiana preset dia manamora ny lahasa hamokatra kalitao avo lenta sary.
Eto no tonga ao amin'ity fonosin'ny Noely ity ny preset 620 ho an'ny Lightroom. Ny hevitr'izy rehetra dia hamafiso ireo sary Krismasy ireo hany ka manjelanjelatra kokoa izy ireo ary mametraka an'io fifandraisana mazika io mifamatotra amin'ireo daty ireo. Manana karazany marobe amin'izy ireo izahay ary eto dia afaka mahita sary ianao izay mampiseho aminao ny fiovana lehibe natao avy amin'ny "teo aloha" ka hatramin'ny "aorian'ny" miaraka amin'ireo preset sasany ho an'ny Lightroom.
Andao holazaina ny preset na sivana no natao mba hanaovana io sary noely io mijery tsara kokoa. Mila manandrana fotsiny ianao amin'ny vitsivitsy mandra-pahitanao ilay mety indrindra amin'ity sary ity.
Preset sasany izay mahavita mahavoa tanteraka ny sary hanome fifandanjana tsara kokoa lokoy na asongadino ny halavan'ny majika amin'ireo jiro manaingo ireo hazavantsika Krismasy. Misy izany noho ny antony rehetra, noho izany dia miatrika ny iray amin'ireo teboka afovoan'ny fonosana ho an'ny Krismasy izahay afaka mahazo izany amin'ny 19 dolara. Tolotra tsara hanitarana ny atiny manokana ho an'ity vanim-potoana amin'ny taona ity.
Ary tsy tokony hanjavona ao a fonosin'ity natiora ity inona ireo kepam-panala. Ny felam-panala izay mianjera tonga lafatra amin'ny asa famolavolana ary matetika ilaintsika amin'ny endrika, loko ary endrika samihafa.
Amin'ny fitambarany 250 sosona misy lanezy misy azontsika atao amin'ity fonosana lehibe ity ho an'ny Krismasy. Izy ireo dia miavaka amin'ny fihenan'ny 5.000px X 3.325 px miaraka amin'ny halalin'ny 300dpi. Izany hoe ho maranitra tanteraka izy ireo raha ampiasaintsika amin'ny carte postales 800 x 600 pixel. Izy ireo koa dia misy loko 5 mba hahafahanao mampifangaro azy ireo amin'ireo asa izay hataonao mandritra ireo andro Noely ireo.
Araka ny hitanao amin'ny sary zarainay matahotra izy ireo tsirairay avy. Ka io dia iray amin'ireo teboka ivon'ity fonosana lehibe ity.
Fomba krismasy miisa 260
Mihodina amin'ny a isika izao andian-dahatsoratra maro loko sy mamiratra amin'ity Krismasy ity. Raha atotaly dia misy 260 ary ahitantsika azy ireo amin'ny endriny rehetra, ny endriny ary io loko mitambatra goavambe io mba hisarika ny sain'ny olona handray ny karatra fiarahabantsika noely.
Ny tena marina dia manana repertoire lehibe ny fananany vola amboarina ny maodely, ka ho an'ireo asa tsy maintsy asehontsika hetsika na fety Krismasy dia tsara kokoa izy ireo. Tahaka ny ambin'ny atiny rehetra, izy ireo dia misy vahaolana avo lenta ary voafaritra tsara; raha sanatria ka izay zavatra nilain'izy ireo dia mendrika ny hoentina any amin'ny milina fanontana ary hijery ilay afisy noforoninay teo am-baravaran'ny klioba sasany na fety eo an-toerana.
Layers Noely 100
Ireo capes Krismasy ireo dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fahalavorariana. Izany dia toy ny mandoko amin'ny borosy izay ny lanezy no nalaina sary sy nandoko, mba hahafahanao mahazo hevitra momba ny famaranana lehibe ananany.
Ireo sosona ireo dia misy amin'ny fomba rehetra ary maro aza no misolo tena litera ka noho ny fahaizantsika mamorona dia azontsika atao ny manome azy toerana amin'ireo karatra firariana fiarahabana na ilay peta-drindrin'ny Noely amin'ny faran'ny taona.
Ny fanapahan-kevitra dia 4.500 px x 4.500 px miaraka amin'ny halalin'ny 300 dpi.
Hazo minimalista 25 ho an'ny Krismasy
Ny iray amin'ireo hevitra lehibe tanterahina miaraka amin'ity fonosana ity dia ny fampidirana azy hazo krismasy minimalista. Izy ireo dia hazo 3D izay manahaka ny tany ambadiky ireo aloka ireo ary endrika kely farafaharatsiny. Izany dia toy ny hoe nisy mpamorona fanaka lehibe naka programa toa an'i Maya ary nandany fotoana nahafinaritra nanamboatra izay fantany ho hazo krismasy tena manokana.
Raha mitady zavatra manokana sy tsy manam-paharoa amin'ny karatra firarian-tsoa izay mila fanoloran-tenanao ianao, ireo hazo minimalista 25 ireo dia tsara lavitra. Miresaka rakitra PSD miaraka amina vahaolana amin'ny 4.650 teboka x 3.125 px ary halalin'ny 300DPI.
PSD Krismasy sosona 5
Ny endrika iray hafa izay manavaka ity fonosana ity dia ireto rakitra PSD 5 ireto izay afaka handravaka tsara ny sasany amin'ireo magazay tadiavintsika amin'izao fotoana izao hahitana fanomezana hafa. Saika a Resipeo muffins mamy tanteraka ary izay loko mavokely sy pastel no manjaka amin'ny lokon'ny lokony.
Namboarina tamin'ny 3D izy ireo, noho izany omena zava-misy tena izy. Izany hoe, azontsika atao ny manambatra azy ireo tanteraka amin'ireo sary azo tanterahina izay ananantsika zavatra haingon-trano na ny lakozianay ho singa fototra. Vita tsara tokoa ary manampy kalitao betsaka amin'ny andiany rehetra amin'ity fonosana ity ho an'ny Krismasy.
Hantsana lanezy 24
Ity andian-fehezam-panala ity dia miavaka amin'ny fitaovana: varahina. Ary ny fahamarinana izay tsy maintsy lazaina fa manana hakantona lehibe miaraka amina olona matotra aloky ny varahina manjelanjelatra mahavariana.
Fehin-dranomandry iray hafa izay manampy kalitao betsaka amin'ny setany iray manontolo. Izy ireo dia Felam-panala 24 misy endriny, hateviny ary firakofana samihafa, na dia samy manana izany hevitra izany aza ny varahina. Raha azontsika atao ny manambatra azy ireo amin'ny singa haingon-trano hafa dia mety hitarika karatra fiarahabana hafa sy manokana, ka andao hiasa kely.
Volom-panala volamena 24
Ny fahasamihafana lehibe amin'ny fonosana teo aloha dia ilay fitaovana solo-tena: volamena. Izy ireo dia miavaka amin'ny refy 6.500 6.500 px X 300 PX sy ny halalin'ny XNUMX DPI.
Ary koa ny endrik'izy ireo dia tena tsara ary azon'izy ireo atao ny manidina miaraka aminy handravaka ny sasany motifs Noely. Anjaranao ny mahalala ny fomba hahitana ny toerana mety handravahana ny asanao ho an'ny mpanjifa samihafa.
Krismasy grunge sy metaly
Toy ny amin'ny fonosana hafa izay nentinay niaraka tamin'ireto andalana ireto, manana fonosana roa mifandraika amin'ny grunge isika ary ny metaly na metaly mavesatra. Mampiavaka azy ireo ny firafitra ampiasaina sy ny fitaovana fivezivezena izay manome karazana fampisehoana hafa. Fanampiny lehibe iray hafa ao amin'ity fonosin'ny Noely ity izay tsy azo hadinoina raha manana izany $ 19 izany isika.
Etsy andaniny 24 4.500 x 4.500 px karazana lanezy, Halalin'ny 300DPI ary loko 4. Raha ny metaly dia miakatra hatramin'ny 4.000 x 4.000 teboka miaraka amin'ny 300DPI ny halaliny. Ah, loko 4 ihany koa hanovana azy ireo sy hampiasana azy ireo mifanaraka amintsika.
Hofaranantsika miaraka amina fonosana lanezy hafa indray izany avy amin'ireo fotsy sy madio ireo ho an'ireo izay manaitra kokoa ary izay manana fironana mialoha kokoa noho ireo antony Krismasy ireo. Misy ihany koa ny mainty hoditra raha sanatria ka manana havana misafidy ny sarimihetsika Tim Burton isika.
Raha tianao ny loharano dia afaka mividy ny fonosana rehetra ianao amin'ny $ 19 fotsiny Ity rohy ity
Raha fintinina, a fonosana lehibe amin'ny singa Krismasy izay tsy hihoarantsika na inona na inona handravahana ireo firarian-tsoa rehetra ireo, ireo taratasy izay anaovana fanomezana taratasy na ilay afisy izay tadiavin'ny mpiara-miasa iray hametavetana ny faran'ny taona. Raha te hanana votoaty misimisy kokoa ao anaty atiny ianao ary mahay mandanjalanja kokoa, tena ilaina ity fonosana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Mihoatra ny 18.00 singa Krismasy ho an'ny volavolanao amin'ny $ 19 fotsiny!